The Nominated cars for MCOTY 2019 ၂၀၁၉မြန်မာတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကားဆုပေးပွဲအတွက် အဆိုပြုထားသည့် ကားများ - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > News > Local Updates > The Nominated cars for MCOTY 2019 ၂၀၁၉မြန်မာတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကားဆုပေးပွဲအတွက် အဆိုပြုထားသည့် ကားများ
The nominations for Myanmar Car of the Year – MCOTY 2019 are done and we haveavery exciting line up of cars. This year the categories have changed to be more consumer focused.
၂၀၁၉ မြန်မာတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကားဆုပေးပွဲအတွက် အဆိုပြုထားသည့်ကားစာရင်းကတော့ အလွန်အမင်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ ကားချစ်သူများကို အဓိကထားပြီး ဆုပေးမည့် ကားအမျိုးအစားစာရင်းများကို ပြောင်းလဲထားပါတယ်။
Hyundai Tucson (SKD)
Hyundai Accent (SKD)
Hyundai Grand i10 (SKD)
Hyundai Creta (SKD)
(USD 90,000 and below)
(Above USD 90,000)
Nissan Navara Plus
(Under USD 50,000)
GAC GM8 (GT Premium)
(Above USD 50,000)
တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကားဆုပေးပွဲ 2019 MCOTY